बच्चाहरुले माटो खान किन इच्छा गर्छन् ? यस्तो छ कारण
निशान न्युज असार २७, 2078
काठमाडौं । केही बच्चा र गर्भवती महिलामा माटो, चक वा रंग जस्ता अनौठो चीज खाने शौख हुन्छ । यसलाई पीका ईटिंग डिसर्डर भनिन्छ । शरीरमा केही चीजको कमीका कारण बच्चामा अनौठो चीज खाने बानी हुन्छ ।
किन हुन्छ माटो खाने इच्छा ?
माटो, चक वा अनौठो चीज खाने शौक १ देखि ७ बर्षसम्मका बच्चा हुने गर्दछ । पटक पटक सम्झाईबुझाई गर्दा पनि बच्चाहरु यो बानी छाड्न सक्दैनन् । बरु उल्टै लुकीलुकी खाने गर्दछन् । यसो हुनुमा बच्चामा केही विशेष प्रकारको पौष्टिक तत्व, जस्तो आइरन, जिंक आदिको कमीले यस्ता अनौठो चीज खाने इच्छा हुने गर्दछ । त्यसमध्ये यी ३ कारण प्रमुख हुन् –
साना बच्चामा माटो खाने बानी हुनुमा रगतको कमीको संकेत हुन सक्छ । बच्चाले खुराकमा केवल दूध मात्र खादाँ रगतको कमी हुन सक्छ । त्यसैले उमेर पुगेका बच्चालाई उमेर अनुसारको खुराकमा अन्न, दाल, तरकारी र फलफूल ख्वाउनु पर्दछ ।
कुपोषण वा मानसिक विकास
खासमा बच्चामा माटा खाने बानीमा पीका ईटिंग नामक एक रोग हो । बच्चामा कुपोषण हुदाँ उनीहरुलाई अनौठो चीज खाने बानी हुने गर्दछ । यसका साथ माटो खाने बानीमा अटिज्म नामक रोग पनि कारण हुन्छ । बच्चाको मानसिक विकास ठीक तरिकाबाट नभएमा अटिज्मको शिकार हुनसक्छन् ।
कहिलेकाँही बच्चाहरु केवल आफ्नो जिज्ञासु स्वभावका कारण माटो खाने गर्दछन् । उनीहरु आसपासको वातावरण बुझ्न हरेक चीज मुखमा हाल्ने समेत गर्छन् । यो कारणले माटो खाने बानी भएका बच्चाको बानी उमेर बढेसंगै छुट्ने गर्दछ ।